isiXhosa Translation | ICTchefs
A nonprofit chef school
ICT/Woolworths Feeding Program
Eliphepha lodwa lingesiXhosa. Oku kukuqonda kwakho lula inkqubo yesicelo. Ifomu yesicelo ibhalwe ngesiNgesi. Zonke iiklasi ze-ICT zifundiswa ngesiNgesi. Siyaqonda ukuba isiNgesi asilolwimi lwakho lokuqala, kodwa uya kusebenza kuso yonke imihla eklasini.
Ukwamkelwa kwezicelo zeKlasi yama-38
22 Agasti 2022 - 24 Matshi 2023
Umhla wokugqibela wokufaka isicelo: 22 Julayi
Iiklasi zifumaneka eKapa kuphela
Kufuneka ufunde yonke into kweli phepha ngaphambi kokukhuphela usetyenziso.
IKLASI YETHU ENTSHA ISEKWE
IKLASI NGANYE YINYANGA NGESIXHENXE KWAYE INQANABA IZIGABA EZINTATHU:
ISIGABA SOKUQALA: Iinyanga ezintathu ezinesiqingatha zekhitshi/igumbi lokufundela/izifundo ezenziwayo. (Isibonelelo sothutho esincinci siya kunikwa umfundi ngamnye emva kweenyanga ezimbini zokuqala.)
ISIGABA SESIBINI: Uqeqesho lweeveki ezintathu kwindawo yokutyela yaseKapa okanye ehotele. (Isibonelelo sezothutho sinikiwe.)
ISIGABA SESITHATHU: Umsebenzi ohlawulwa iinyanga ezintathu kwindawo yokutyela yaseKapa okanye ehotele. (Akukho sibonelelo sezothutho.)
BONKE ABAFUNDI KUFUNEKA BAGQIBE NGEMPUMELELO ONKE AMAGABA AMATHATHU UKUZE BAPHUMELE ISIGQESHO KWAYE BAFUMANE ISIQINISEKISO SE-ICT.
Kufuneka kubekanti ngonyele i-COVID-19 xa ufake isicelo.
Njengomnikelo womoya, kufuneka uphathe ilitye elincinci kuvavanyo lwakho lokuqala, naliphina ilitye.
Uqeqesho simahla. Bonke abafundi bafumana ibhasari epheleleyo yamahhala.
Abafundi kufuneka bazihlawulele iindleko zabo zothutho kwiinyanga ezimbini zokuqala – kwaye kufuneka ubenayo i-Phone kwaye isoloko ine-airtime kunye neData.
Liklasi ziqala ngo-7:30 am – 4:30 pm, ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu, kuquka iiHolide zikaWonke-wonke, kwakunye nosuku olunye lwempelaveki (nokuba nguMgqibelo okanye ngeCawa).
Akukho zifundo ezimfutshane okanye ezingesosigxina.
Likhosi ziseKapa kuphela.
Awunakufaka isicelo kwi-ICT ukuba nguwe wedwa okanye ungumkhathaleli oyintloko womntwana ongaphantsi kweminyaka emi-2 ubudala. Oku kungenxa yokuba i-ICT ikholelwa ngamandla ukuba umntwana omncinci kufuneka abe nexesha elifanelekileyo kunye nomzali onenkathalo kwaye siyazi ukuba iimfuno zekhitshi lobuchwephesha zinokuphazamisana ngokulula noxanduva olubalulekileyo lwabazali. Asifuni ukuba ukhethe phakathi kokukhathalela umntwana wakho kunye nemisebenzi yakho emsebenzini wakho.
Wamkelekile kwiPhepha lethu leSicelo soMfundi
Kufuneka ube neminyaka eyi-21 okanye ngaphezulu ukuze ufake isicelo.
Awunganzelekenga upase ibanga leshomi.
Kufuneka ubesempilweni entle, ukomelela komzimba kunye namandla ayimfuneko ngokupheleleyo.
Kufuneka ubenayo i-Phone kwaye isoloko ine-airtime kunye neData.
Kufuneka ukwazi inxaso mali yokwela kulo lonke uvavanyo lwakho. Ubomi bakho basekhaya kufuneka buzinze ngokwaneleyo ukuze wenze ngokupheleleyo, i-100% ukuzinikela kwexesha, umzamo kunye namandla kuqeqesho lwakho.​
Landela yonke imiqathango ekwizisicelo zethu. Xa isicelo sakho ungagqibanga ukusipendula asizokwamkeleka.
Niza kungena intsuku ezintanthu zovavanyo ukuze wankeleke.
Xa uvavanywe kathathu lonto ayithi wankelekile.
I-ICT inokwamkela abona bantu babini bangengobemi boMzantsi Afrika abona baninzi kwiseshoni yeklasi nganye.
Umfundi kuya kufuneka ohlolwe ukuba awunatyala owake walibanjelwana kodwa lonto ayizukuthintela ukuba isicelo sakho singankeleki.
Isicelo sakho kufuneka sifunyenwe kuthi ungadlulanga umhla woku-22 kuJulayi wama-2022.
Izicelo zingangeniswa KUPHELA nge-imeyile okanye ngeposi. Imiyalelo yokungeniswa ikwifom yesicelo.
Uya kufumana umnxeba ungadlulanga owe-1 kaAgasti ngodliwano-ndlebe lwakho lokuqala.
Njengoko kuchaziwe ngasentla, kufuneka uze nalo naliphi na ilitye elincinci okanye ilitye kudliwanondlebe lwakho lokuqala.
Ukuba uthumela isicelo sakho nge-intanethi cafe, kufuneka uqinisekise ukuba bathumela WONKE amaphepha kunye nezincamatheliso ezifunekayo. I-imeyile ephendula ngokuzenzekela yerisithi iya kuya KUPHELA kwidilesi ye-imeyile ethumela isicelo.
Ngokucofa apha ngezantsi kukuqinisekisa ukuba ndiyifundile yonke into ebhalwe kweli phepha kwaye ndiyayiqonda.
KHUPHELA IFOMU YAM YESICELO NGOKU
Making an online tax-deductible contribution is easy
Please visit our Donation Page
South African Nonprofit Organization #076-625 Public Benefit Organization #930034019
© 2019 Designed by CaleCommunications.com